I-Iron Duke ihlela ukulanda uMkhwanazi | News24
I-Iron Duke ihlela ukulanda uMkhwanazi
Durban - USihlalo we-Orlando Pirates u-Irvin "Iron Duke" Khoza uhlela ukuqinisa udonga lwakhe lwasemuva ngesitobha seBidvest Wits okuthiwa uzimisele ngokushaya indesheni kubaphathi bayo ukuze bamudedelele sona.
IBucs izobhekana neLamontville Golden Arrows kuasa ngoLwesibili ngo-19:30 e-Orlando Stadium, eSoweto.
IBucs iya kulo mdlalo nje umqeqeshi wayo uMilutin "Micho" Sredojevic usanda kuphumela obala ukuthi udinga izitobha ngoba udonga lwakhe lwasemuva luyaxega.
Njengoba sekusele amasonto ambalwa kuvalwe iwindi lokudayiselana ngabadlali, leli phephandaba lithole ukuthi uKhoza uhlela ukuhlangana nabaphathi beWits ukuzeimdedelele uBuhle Mkhwanazi odlala emuva oke wahlala isikhathi eside elimele.
Kuthiwa uKhoza ukhohlwa wukuthi uMkhwanazi angaba yisisombululo emuva njengoba bexega. Imithombo yeLANGA engaphakathi kwiBucs ithi uKhoza njengoba ethule nje amakhadi akhe uwadlalela esifubeni.
OLUNYE UDABA: UMBONO: ‘Baba uKhoza sicela usilandele uKrol noma uMashaba’
"Uma sekuvulwe iwindi lokudayiselana ngabadlali angase asayinise abadlali abathathu abavutha bhe. Kubona kukhona abadlali bangaphandle aseqalile ukuxoxa nabo.
"Ngakolunye uhlangothi uBenard Morrison liyamfimfa ikusasa lakhe futhi angase axoshwe ukuze kuvuleke uphawini wabadlali bangaphandle. Kuleli uhlela ukushela iWits imdedelele uMkhwanazi.
"UKhoza umthanda ukufa uMkhwanazi ubona engaba yisixazululo odongeni lwabo olubukeka luvuza. Kodwa-ke sizobona kugcina kanjani ngoba iwindi selizovulwa," kusho umhtombo waleli phephandaba ozazi zonke ezithinta iPirates.
Imizamo yokuthola uKhoza ukuba aphawule ngalolu daba iphunzile njengoba ucingo lwakhe belukhala lungabanjwa.
UJose Ferreira isikhulu esiphezulu kwiWits, uthi okwamanje abakahleli ukumdayisa uMkhwanazi. "Kuthina sisenezinkinga emuva silinyalelwa njalo. Sisebhizinisini nathi ngeke sikwazi ukudayisa umdlali wethu omqoka," kusho uFerreira.